भाग्नेक्रममा गोली लाग्दा ढाड्मा गोली लाग्छ कि छातिमा ? जवाफ चाहियो – हरि घर्ति मगर – Sanghiya Online
Posted on : February 25, 2018 March 2, 2018 - No Comment
गत बुधवार रुपन्देहीको देवदहमा,रुपन्देही प्रहरी द्वारा गुण्डा नाइके भनिएका मनोज पुन र सार्पसुटर भनिएका सोम आले प्रहरीसङ्गको मुड्भेट्मा मारिएको भनी विभिन्न सामाजिक सन्जालमा समाचार भाइरलभए।
हालसम्म प्राप्त, समाचारमा देखिएका र घटनाका प्रकृति हेर्दा ग्यारेन्टीका साथमा भन्न सकिन्छ, यि गुण्डा नाइकेका आरोपित मनोज पुन र सोम आले, प्रहरीसङ्गको कुनै दोहोरो मुढ्भेटमा मारिएका होइनन्। किनभने उनिहरुको कथित इन्काउण्टरको दुईदिन अगि नेपाल प्रहरीले उनिहरुलाई भारतको गोवामा पक्राउ गर्यो भन्ने समाचार भाइरल भएको थियो। यो समाचार के कसरी आयो र सत्यतथ्य केहो? प्रहरीद्वारा खण्डन नगर्दै उनिहरु मारिए। प्रहरीको भनाईनुसार रातको ३ बजे भएको मुडभेटमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा, प्रहरीलाई नै गोली प्रहारगरी भाग्ने क्रममा प्रहरीको जवाफी कारवाहीमा प्रहरीको गोलीद्वारा उनिहरु मारिएको भनिएको छ,जवकी ती दुबैजनाको लगभग एकैठाउ क्षातीको करिव एकवित्ता भित्र ग्रुपिङ्ग रुपमा गोली लागेको देखिन्छ, रातको अध्यारोमा कसरी मुटुको विचविच भागमा पर्नेगरी, त्योपनी ग्रुपिङ्ग रुपमा गोली लाग्यो? भाग्ने क्रममा गोलीलाग्दा शरीरको पछाडी भागमा गोली लाग्छकी,छातिमा गोली लाग्छ..? गोलीलागेको प्वाल किन कालो जलेको देखिन्छ? त्यसरी कालो जलेको घाउहुनु गोली करिव १/२ मिटर अर्थात नजिकैवाट प्रहार गरेको मानिन्छ। भाग्नेक्रममा हानिएको गोली किन शरीरको पछाडी भागमा छैन? छाती जस्तो सम्वेदनशिल ठाउँमा गोलीलाग्दा एकै गोलीमा मान्छे मर्न सक्छ,नमरेपनी ढल्न सक्छ, ढलेपछी पनि किन २२/२३ राउन्ड गोली प्रहार गरियो? उनिहरुलाई घाइते बनाएर नियन्त्रणमा लिएर अन्य सुचनालिन खोजिएन? यसवाट प्रष्टै छ, निजहरुलाई प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा हत्कडी वा वाधिएको अवस्थामा गोलीप्रहारगरी हत्या गरेको हुनुपर्छ।
नेपालको संविधान र कानूनले कोहि कसैलाई, कुनैपनि अवस्थामा हत्यागर्ने,वा मार्ने मराउने अधिकार दिएको छैन। त्यसैले कोहि कसैले कानूनभन्दा बाहिर गएर कोहि कसैको हत्या गर्छ भने त्यो जधन्य अपराध हो,कानुनको रक्षक कानुन भन्दा बाहिर गएर, निजहरु अपराधी नै भएपनी हत्या गर्न पाइदैन। यदी पाइन्छ भने, जेलमा रहेका सम्पूर्ण अपराधीलाई गोली ठोके भयो नि..! यस अर्थमा मनोज पुन, सोम आले र निजहरुलाई हत्यागर्ने प्रहरीलाई फरक किसिमले हेर्न सकिन्न।
यो घटनालाई छानवीनको डायरामा ल्याउन पर्छ।
आउनुहोस् सोही घटनाको प्राप्त सुचनाहरु वारेमा पनि समालोचना गरौं।
– प्रहरीले गत असौज २३ गते तत्कालीन निर्माण ब्यबसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज गौचन,एमालेका भात्रीसंस्था युवासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारी र एमाले रुपन्देहीका नेता निलकण्ठ पौडेलका छोरा वसन्त पौडेलको हत्या भएको केहिदिनमा नै, यो घटना मनोज पुनवाट भएको भनेर प्रहरीले दावी गर्यो। प्रहरीले योदावी उसको कुनै गहिरो अनुसन्धान र साक्षी सवुत र प्रमाणको आधारमा गरेको थिएन। मात्र कुनै गोप्यठाउवाट मनोज पुन स्वयंले नभै,उसका मान्छेद्वारा यो घटना मनोज पुनले घटाएको हो भनेर घटनाको जिम्मेवारी लिएको भनिएको थियो। घटना मनोज पुनले नै घटाएको भन्ने पुष्टि नभएको र उ स्वयमले पनि फोन गरेको नहुनाले,अरु जो कसैले, हत्यागरेर मनोज पुनको नाम लिन सक्ने अनुमान गर्न पनि सकिन्छ।
– अर्कोतर्फ सिआईबीले आफ्नो अनुसन्धानवाट गौचनको हत्या समिरमाम सिंह बस्नेतले गरेको भनेर भनेकोछ। सिआइबीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समिरमानले भनेका छन्,सरोज गौचनको हत्या र दावा लामालाई गोली मेरै योजनामा हानिएको हो। हत्यामा खटाइएका सम्पूर्ण टिमको खटनपटन लोप्साङ लामाले गरेको हो। मनोज पुन सङ्ग दुर्गा तिवारीको हत्यापछि हामी अलग भैसकेका छौं।
– जानाकारहरु भन्छन्,समिरमानलाई चितवनवाट पक्राउ गरिएको भनिएपनी, खासमा सिआईबीका सई रमेश बजगाईको टोलीले उनलाई भारतवाट पक्राउगरी नेपाल ल्याइएको थियो।
कथित इन्काउन्टरको दुइदिन अगि मनोज पुनलाई पनि उनै बजगाईको टोलीले भारतवाट पक्राउगरी नेपाल ल्याएका थिए। इन्काउण्टरको नाममा मनोज र सोम आलेको हत्या गरिदा, केश अन्तरराष्ट्रिय भयो भने, भारतिय प्रहरी पक्ष समेत फस्ने डरले हत्या नगर्ने सर्तमा निज मृतकहरुलाई,सई बजगाइलाई बुझाइएको थियो।
– गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार समिरमान बस्नेत,आरोपी मनोज पुन र सार्प सुटर भनिएका सोम आलेलाई,सहि बजगाईको टोलीले भारतवाट पक्राउगरी ल्याएपनी, समिरमान बस्नेत रामेछाप घरभएका डिएसपी कुमोद ढुंगेलको आफन्त भएकोले, समिरमानलाई बचाएर मनोज पुन र सोम आलेलाई हत्या गरिएको थियो।
– Dsp कुमोद ढ्ङेल उक्त समयमा रुपन्देही देवदहमा एकहप्ता अगिमात्र रामेछापवाट सरुवा भएर आएका थिए।
– गएको पुस ४ गते एमाले भात्रीसंस्था युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा पनि प्रहरीले यो हत्या मनोज पुनले गरेको भनेको थियो।
अचम्मको कुरा केछभने, उक्त हत्या घटनामा पनि कोहि पक्राउ परेको थिएन र गोलीहान्ने सुटरको कुनै पहिचान, गोली हानेको कुनै देख्ने जान्ने वास्तविक कुनै साक्षी प्रमाण केही थिएन।
– जिल्ला प्रहरी कार्यलय रुपन्देही अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा रहेकै बेलामा, जिप्रका रुपन्देहीका Dsp वेद बहादुर पाण्डेले लेनदेन विषयमा तिवारीको हत्या भएको हो भनेका छन् भने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद सिंहले मनोज पुनले हत्या गेरेको हो भनेर भनेका थिए। सोही क्रममा मनोज पुनले फोनगरेर भनेकोछ, तिवारीलाई गोली हानेको मैले हो, पहिला सम्झाउदा मानेन,प्रहरी द्वारा मेरा साथिहरुलाई पक्राउ गराएर हैरान गरायो, अब एमालेका मान्छेलाई छानीछानी गोली हान्छु भनेको छ भन्ने हल्ला व्यापक बनाइएको थियो।
– ईन्टरनेटवाट आएको भनिएको त्यो फोन, कहाँबाट कसरी गरिएको हो? फोन मनोज पुनको हो वा होइन..? पुष्टि भएकै थिएन। त्यस्को १८ दिनपछि रुपन्देही देवदह २ एमालेका नेता निलकण्ठ पौडेलका छोरा बसन्त पौडेलको हत्याभयो, यसपटकपनी प्रहरीले उसैगरी हत्याको जिम्मेवारी केही मानिसलाई फोनगरेर मनोजले लिएको तर हामिलाई भने कुनै आधिकारिक जानाकारी नभएको Dsp डिल्लीराम पाण्डेले बताएका थिए।
– हप्ता असुली, लगायत थुप्रै गुण्डागर्दीवाट थुप्रै पैसा असुलेको जस्ता विभिन्न आरोप लागेका, मृतक मनोज पुनको रुपन्देही देवदह नगरपालिका ५ मा रहेको,पलास्टिकको त्रीपाल टागिएको,घरको ठाउँठाउँमा रङ् उक्किएको,घरको वरिपरि बाउन्ड्री नभएको,अगाडी मुलगेट नभएको,झ्यालमा पनि रङ् नलगाइएको एकतले घर देख्दा, उनिमाथी लगाइएका हप्ता असुली र थुप्रै गुण्डागर्दीवाट पैसा असुलेको भन्ने आरोप मिथ्या हुन् भनेर बुझ्न कठिन हुदैन।
– अर्को तर्फ हप्ता असुली, लगायत गुण्डागर्दीवाट थुप्रै पैसा असुली बैंक ब्यालेन्स गरेकोभए,कहाँ कुन् बैंकको, कुन् खातामा कति पैसा राखिएको छ ? सप्रमाण देखाउनु पर्नेमा त्यो पनि प्रहरीले हालसम्म देखाउन सकेको छैन।
– जहाँनिया राणाशासन र पन्चायती निरंकूश व्यवस्थालाई समेत बिर्साउनेगरी, यसरी विभिन्न इन्काउण्टर एवं मुडभेटको नाममा मानिस मार्न मराउन कोहि कसैले पाइदैन भन्ने आम जनताको धारणा रहि आएको छ।
– सवै घटनाको समालोचना गर्दा प्रहरीले साक्षी,सवुत,प्रमाण र बैज्ञानिक परिक्षणवाट तथ्य नजिक पुगेर मनोज पुनमाथि अभियोग करार गरेको हैन, केवल शंका भरमा मनोज पुन माथी सम्पूर्ण अभियोग लगाएको हो।
– घटनाको प्रकृति र सतहमा देखिएका सम्पूर्ण वष्तुपुरक अवस्थालाई समालोचना गर्दा के देखिन्छ भने,प्रहरी बाहिर प्रचार गरेजस्तो गुण्डा नाइके भनिएका मनोज र उनका सहयोगी सोम आले मुड्भेट्मा मारिएको कुरा पटक्कै होइन। वरु कुनै गोप्यकुरा खुल्ने डरले इन्काउण्टरको नाममा उनिहरुको हत्या गरिएको हो वा,रुपन्देहीका एमालेका नेताहरुलाई एकएक मार्छु भनिएको भन्ने हल्ला र एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै,प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उनलाई खुसी बनाउन, पुन र आलेलाई सुइकाइएको हो? अर्थात हत्या घटनाको पछाडी रिमोट कन्ट्रोल कसले छोपेको छ, को कस्ले,किन मार्न लगायो मार्नु पर्ने कारण केछ..? सम्पूर्ण रहस्य उजागर हुनेभयले उनिहरुको नियोजित किसिमवाट हत्या गरिएको हो? सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कानूनको डायरामा ल्याउनु जरुरी छ।
अन्यथा यो हत्याकाण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयसम्म पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
स्रोत:- पहिलो पोष्ट/ हरि घर्ति मगरको फेसबुक वालबाट